XOG: Shabaab oo Dib ula wareegay deegaan Dhawaaan laga qabsaday oo ka tirsan Gobolka… – Kismaayo24 News Agency
XOG: Shabaab oo Dib ula wareegay deegaan Dhawaaan laga qabsaday oo ka tirsan Gobolka…
by admin 27th March 2016 076
Wararka aynu heleyno ayaa shegaya in Ciidamo badan oo ka tirsan Alshabaab ay saakay la wareegeen deegaanka Ceel-Baraf oo ka tirsan Gobolka Shabeelada Dhexe.
Ciidamada ayaa la sheegay in ay Si Nabad galyo ah deegaanka ula wareegen ka dib markii Ciidamada Dowlada ay isaga Baxaan Gudaha Magalada dadka Deegaanka ayaana u xaqiijiyay Warbaahinta in Alshabaab ay hada ku suganyihiin Bartamaha Magaalada.
Ciidamada Dowlada ee gacanta ku haayay Ceel-Baraf ayaa Laaba Maalin ka hor ka baxay Halkaasi waxaana la ogeyn sababta ka dambeysa in Ciidamada Dowlada ay Faarujiyaan Ceel-Baraf iyadoo aysan jirin Cid kula dagaalanta gudaha Magalada.
Warar kale ayaa Tibaaxaya in Odayaashii degaanka ee Ciidamada Xoogga halkaa ku soo dhaweeyay ay Degaanka ka Carareen oo ay galeen Xerada Ciidamada AMISOM oo ku taalla Banaanka Degaanka Waxaana ay ka baqdin qabaan in Shabaabka ay dhibaato u geeystaan Maadama ay horay Magalada ugu soo dhaweyeen Ciidamada Dowlada oo Bil ka hor la wareegay Deegaanka Ceel-Baraf ee gobolka Shabeelda Dhexe.
Deg-deg: Baarlamanka Jubbaland oo ka farxiyey Axmed Maddobe, Iyagoo……………
War Hada ah: Wafdi Balaaran oo ka Socda IGAD oo goordhaw gaaray Magaalada Garoowe iyo kulamo Xasaasi ah oo….
Shil dayuuradeed oo ka dhacay Kenya & dad ajaaniib ah oo ku dhintay (Sawirro)
Mohamed Abdirashid Abaajo 13th February 2019
WAR CUSUB: Shir looga Hadlaayay Horumarinta iyo Dib u Dhiska kaabayaasha Dhaqaalaha Dalka ayna ka qeyb galeen Xubno ka socda Dowlad Goboleedyada oo Muqdisho lagu qabtay+Sawirro
Tifaftiraha K24 18th May 2016
DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo gaaray Galkacyo iyo Diyaaraddo dusha kala socda Ammaankiisa
admin 13th January 2018 13th January 2018